တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ - မြန်မာနိုင်ငံ မြစ်ချောင်းများဆိုင်ရာ ကွန်ယက် (BRN)
+ - တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း လျှပ်စစ် နိုင်ငံတကာ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ (Central China Power International Trade Company) Click to collapse
+ - ချန်ဂျင်း (တိုင်းတာရေး၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး၊ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရေးနှင့် သုတေသနပြုရေး) ဌာန [Chanjiang Institute of Surveying, Planning, Design and Research (CISPDR)] Click to collapse
ချန်ဂျင်း (တိုင်းတာရေး၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး၊ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရေးနှင့် သုတေသနပြုရေး) ဌာန [Chanjiang Institute of Surveying, Planning, Design and Research (CISPDR)]
ချန်ဂျင်း (တိုင်းတာရေး၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး၊ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရေးနှင့် သုတေသနပြုရေးဌာန၊ အတိုကောက်အားဖြင့် ချန်ဂျင်း ဒီဇိုင်းအဖွဲ့) သည် "အကြီးစားနှင့် ဧရာမ"ရေသိုလှောင်ရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အင်ဂျင်နီယာကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ တိုင်းတာမှုများ၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း၊ သုတေသနပြုခြင်း၊ အတိုင်ပင်ခံ အကြံပြုခြင်း၊ ကြီးကြပ်ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်သည်။ ဤလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ (CISPDR) အဖွဲ့သည် တရုတ် နိုင်ငံတွင် အကြီးဆုံး ဖြစ်သည်။ ချန်ဂျင်းဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကျော်ကြားသော ကျောက်သုံးလုံး မြစ်ကျဉ်းဆည် တည်ဆောက်ရေးကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့သည်သာမက ဘီလစ်ဇ် (Belize)၊ အီသိယိုးပီးယား၊ ဆူဒန်၊ ကိုလံဘီယာ၊ သီရိလင်္ကာ၊ ဂီနီယာ၊ ဖီဂျီ၊ ကွန်ဂို၊ အီကွာတိုရီ ယယ် ဂီနီနှင့် အာဖဂန်နစ္စတန် နိုင်ငံများတွင် စီမံချက်များ လုပ်ဆောင်နေပါ သည်။ ချန်ဂျင်း တိုင်းတာရေးအဖွဲ့မှ လက်အောက်ခံအဖွဲ့ တဖွဲ့သည် ဧရာဝတီမြစ်ဆုံဆည်နေရာသို့ သွားရောက်ခဲ့ သော ၅ လကြာခရီးကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်က ဆောင်ရွက်ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။ စက်ဖြင့် မြေဖေါက်ခြင်း၊ ရေလှောင်ကန် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဇလ ဗေဒတိုင်းတာခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
1155# Liberation Ave., Wuhan City, Hubei 430010 PRC
+86 27 82828605
+ - တရုတ်နိုင်ငံ ဒါတန်း ကော်ပိုရေးရှင်း [China Datang Corporation (CDT) Click to collapse
တရုတ်နိုင်ငံ ဒါတန်း ကော်ပိုရေးရှင်း [China Datang Corporation (CDT)]
တရုတ်နိုင်ငံ ဒါတန်း ကော်ပိုရေးရှင်း (CDT) သည် အကြီးစား လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီ ၅ ခုအနက်မှ တခု ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကို ယခင်က တရုတ်နိုင်ငံတော် လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်း၏ တစိတ်တပိုင်း လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ် ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် ၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် တည်ထောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အစိုးရက သက်သက်ပိုင်သည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မီတီက စီမံခန့်ခွဲသည်။ သို့သော်လည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များနှင့် အစုရှယ်ယာရောင်းချရေး လုပ်ငန်းများတွင် နိုင်ငံတော်ကောင်စီ၏ ခွင့်ပြုချက်အရ စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်နေသည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ (CDT) ကော်ပိုရေးရှင်းက လန်ဒန်နှင့် ဟောင်ကောင်ဈေးကွက်များတွင် အစုရှယ်ယာ ရောင်းဝယ်ရန် စာရင်းသွင်းထားသည့် "ဒါးတန်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက်" (Datang International Power Generation Co., Ltd.) ကို ပိုင်ဆိုင်သည်။ ၎င်းကုမ္ပဏီ၏ ဆောင်ပုဒ်မှာ "သန့်စင်သော စွမ်းအားကို ထောက်ပံ့ မည်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဘ၀များ ဖြစ်စေရန် အလင်းပေးမည်" ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
No.1 Guangningbo Str., Xicheng District, Beijing 100032 PRC
+86 10 66586666
+ - တရုတ်နိုင်ငံ ဂီဇောင်ဘားအုပ်စု ကုမ္ပဏီ [China Gezhouba Group Co. (CGGC)] Click to collapse
တရုတ်နိုင်ငံ ဂီဇောင်ဘားအုပ်စု ကုမ္ပဏီ [China Gezhouba Group Co. (CGGC)]
တရုတ်နိုင်ငံ ဂီဇောင်ဘားအုပ်စု ကော်ပိုရေးရှင်း (Gezhouba) သည် အစိုးရပိုင် အိမ်ယာဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီကြီးတခု ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းက ပြည်ပတွင် ဆည်များတည်ဆောက်ရန် ဘဏ္ဍာငွေထောက်ပံ့ခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း ပြုနေပါသည်။ ဂီဇောင်ဘား ကော်ပိုရေးရှင်းက အာရှတိုက်နှင့် အာဖရိကတိုက်ရှိ နိုင်ငံ ၃၀ ကျော်တွင် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေပါသည်။ (နိုင်ငံတကာ၏မြစ်များ International Rivers မှ The New Great Walls အကြောင်းဖော်ပြချက်မှ)
လောပီတရေအားလျှပ်စစ်ဓါတ်အား (ဘီလူးချောင်း ၃)
12th F, Building B, Wantong New World Plaza, No2Fucheng Menwai Dajie, Xicheng District, Beijing 100037 PRC
+86 10 68066660
+ - တရုတ်နိုင်ငံ ရေအားလျှပ်စစ် အင်ဂျင်နီယာ ကုမ္ပဏီအုပ်စု [The China Hydropower Engineering Group Co. (CHECC)] Click to collapse
တရုတ်နိုင်ငံ ရေအားလျှပ်စစ် အင်ဂျင်နီယာ ကုမ္ပဏီအုပ်စု [The China Hydropower Engineering Group Co. (CHECC)]
တရုတ်နိုင်ငံ ရေအားလျှပ်စစ် အင်ဂျင်နီယာ ကုမ္ပဏီအုပ်စု (CHECC) ကို တရုတ်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီ၏ နိုင်ငံတော် ပိုင်ဆိုင်မှုများကြီးကြပ်ရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မရှင်က တိုက်ရိုက် စီမံအုပ်ချုပ်ပါသည်။ ဤကုမ္ပဏီအုပ်စုသည် အကြီးစားနိုင်ငံတော်ပိုင် ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံတွင် ရေအား လျှပ်စစ်နှင့် ရေအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ စီမံချက်များတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ဒီဇိုင်းပုံစံထုတ်ခြင်း၊ အကြံပေးခြင်း၊ ဆောက်လုပ် ရေး လုပ်ငန်းများ၌ ကြီးကြပ်ပေးခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း၊ စီမံကိန်းများကို စီမံထိန်းသိမ်းပေးခြင်း၊ စသည့် အကျယ်အပြန့် သော နည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ ထိုမျှမက ရေအားလျှပ်စစ်နှင့် သက်ဆိုင်သော၊ စွမ်းအင် လောင်စာအသစ်များနှင့် သက်ဆိုင်သော EPC စီမံကိန်းများ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့် ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းကိစ္စများ၊ မြစ်ဝှမ်းဒေသများအတွက် ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်ယူနိုင်ရန် စီမံကိန်းကြီးတခုလုံးရေးဆွဲ ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ (CHECC) သည် အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်နေသည့် ကျောက်သုံးလုံး ဧရာမဆည်ကြီးတည် ဆောက်မှု ကိစ္စ (Three Georges Project) တွင်လည်း ပါဝင်ပတ်သက်မှု ရှိပါသည်။
တောင်ပိုင်း-အလယ်ဖက် ဒီဇိုင်းနှင့် သုတေသနအင်စတီကျု (CHECC) [အတိုကောက်အားဖြင့် MSDI ဟုလည်း ခေါ်သေး သည်] သည် (CHECC) က အပြည့်အ၀ ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးထားသည့် လက်ခွဲကုမ္ပဏီတခု ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရေ အားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေပါသည်။ ၁၉၄၉ ခုနှစ် တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ရေအားလျှပ်စစ် စီမံ ကိန်းများအတွက် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုပြုခြင်းနှင့် ဒီဇိုင်း ထုတ်ခြင်း၊ အကြံပေးခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊ စောင့် ကြည့် လေ့လာအကဲဖြတ်ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်နေသည်။ ထို့အပြင် စီမံကိန်းကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာနိုင်မှု ဆိုးကျိုးများကို လည်း ဆန်းစစ်လေ့လာပေးသည်။ ၎င်းကုမ္ပဏီက အီရန်၊ လစ်ဗျား၊ လာအို၊ ဗီယက်နမ်၊ ကမ်ဘောဒီးယား၊ အီသီယိုပီးယား နိုင်ငံများတွင် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။ ၎င်းကုမ္ပဏီ၏ အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်အရ MSDI သည် "အချိန် ပြည့် လူမှုရေး တာဝန်သိစွာ အပြုသဘောဆောင်သည့် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေသည်" ဟု ဖော်ပြထားသည်။ (CHECC) ၏ အခြားလက်ခွဲကုမ္ပဏီတခုမှာ ကူမင်းရေအားလျှပ်စစ် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး၊ ဒီဇိုင်းနှင့် သုတေသန အင်စတီကျု [Kunming Hydroelectric Investigation, Design and Research Institute (KHIDI)] ဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆည် တည်ဆောက်မှု လုပ်ငန်းအချို့တွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်။
သံလွင်မြစ် အထက်ပိုင်းဆည် (MSDI မှတဆင့်)
ဟတ်ကြီးဆည် (MSDI မှတဆင့်)
ရွှေလီ အမှတ် ၁ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း (KHIDI မှတဆင့်)
သံလွင်မြစ် အထက်ပိုင်းဆည်များ (KHIDI မှတဆင့်)
အောက်ဖက် ပေါင်းလောင်းဆည် (KHIDI မှတဆင့်)
No.2Beixiaojie Liupukang Dewai Beijing 100011 China
Tel: +86-10-5197 3399
Fax: +86-10-8208 4665
MSDI International Business Department Phone: 0731-5073019
+ - တရုတ်နိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထရပ်စ်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီ [China International Trust & Investment Co. (CITIC) Click to collapse
တရုတ်နိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထရပ်စ်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီ [China International Trust & Investment Co. (CITIC)]
ယခင်က တရုတ်နိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထရပ်စ်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီဟု လူသိများသည့် (CITIC) ကုမ္ပဏီအုပ်စု သည် နိုင်ငံတော်ပိုင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီတခု ဖြစ်ပြီး ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ (CITIC) ကုမ္ပဏီသည် ယခုအခါ ရဲရွာဆည်နှင့် မြစ်ငယ်ဆည်များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပါသည်။ ယခင်ကလည်း ၎င်းကုမ္ပဏီက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရေအားလျှပ်စစ် လုပ်ငန်း ၂ ခုကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်ရှိ ၃၀ မဂ္ဂါဝပ် သဖန်း ဆိပ် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ (၂၀၀၂ ဇွန်လ) နှင့် မကွေးတိုင်း၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်ရှိ ၇၅ မဂ္ဂါဝပ် မုန်းချောင်းရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံ (၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ) တို့ ဖြစ်သည်။
Capital Mansion,6Xinuan Nan Rd., Beijing, 10004 PRC
+86 10 64665534
+ - တရုတ် အမျိုးသား လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ ကုမ္ပဏီ (China National Electric Equipment Co.) Click to collapse
တရုတ် အမျိုးသား လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ ကုမ္ပဏီ (China National Electric Equipment Co.)
တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရပိုင် ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်ပြီး ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အပူအားဖြင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအား ထုတ်ယူခြင်း၊ ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်ယူခြင်း၊ လျှပ်စစ်ပို့လွှတ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ လျှပ်စစ် ထောက်ပံ့ပေးခြင်း စီမံကိန်းများ အတွက် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများကိုလည်း ထောက်ပံ့မှု ပြုပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းရော၊ ပြည်ပတွင်ပါ လုပ် ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေပါသည်။
1 Lianhuahe Hutong, Beijing 100055 PRC
+86 10 62364477
+ - တရုတ်နိုင်ငံ အမျိုးသား စက်ယန္တယားကြီးများ ကော်ပိုရေးရှင်း (China National Heavy Machinery Corporation) Click to collapse
တရုတ်နိုင်ငံ အမျိုးသား စက်ယန္တယားကြီးများ ကော်ပိုရေးရှင်း (China National Heavy Machinery Corporation)
၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ အမျိုးသား စက်ယန္တယားကြီးများ ကော်ပိုရေးရှင်းသည် တရုတ်နိုင်ငံမှာ ရော၊ ပြည်ပမှာပါ ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည့်ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများ အတွက် စက်ပစ္စည်းများကို တင်ဒါတင်သွင်းခြင်း ပြုပါသည်။
No. Jia 23, Fuxing Road, Gongzhufen, Beijing 100036 PRC
+86 10 68211861
+ - တရုတ်နိုင်ငံ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်ပိုရေးရှင်း [China Power Investment Corporation (CPI)] Click to collapse
တရုတ်နိုင်ငံ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်ပိုရေးရှင်း [China Power Investment Corporation (CPI)]
တရုတ်နိုင်ငံ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်ပိုရေးရှင်း (CPI) သည် "မြစ်ဆုံဒေသ ရေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်း စီမံချက် များ" သို့မဟုတ် မေခ/မလိခဆည်များအတွက် စီမံချက် မန်နေဂျာဖြစ်ပါသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်ပိုရေးရှင်း (CPI) သည် ယခင် တရုတ်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံတော် လျှပ်စစ်စွမ်းအား ကော်ပိုရေးရှင်း [State Power Corporation of China (SP)] ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဌာန အပိုင်းမှနေ၍ ခွဲထောင်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မှတ်ပုံတင်ထားသော အရင်းအနှီးအဖြစ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁. ၅၇ ဘီလျံ ရှိပြီး၊ (CPI) သည် နိုင်ငံတော် ကောင်စီ၏ အသိအမှတ်ပြုချက်အရ စမ်းသပ် အစိုးရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး၊ နိုင်ငံတော်ပိုင် ဦးပိုင် ကော်ပိုရေးရှင်း တရပ် ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းကြီးတခု ဖြစ်ပါသည်။
၂ဝဝ၇ ခုနှစ်၊ အစောပိုင်း၌ တရုတ်နိုင်ငံ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်ပိုရေးရှင်း (CPI) တောင်ပိုင်းဌာနခွဲသည် "မြန်မာရေအားလျှပ်စစ် စီမံချက်များ၏ အရာရောက်မှုကို စိတ်ပါဝင်စားမှု ပြသသောအားဖြင့်" မြန်မာရေအားလျှပ်စစ် ဆိုင်ရာ ဌာနခွဲ (Myanmar Hydro Division) တခုကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ (CPI) ဥက္ကဋ္ဌသည် (၂ဝဝ၇) ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ် ဝါရီလအတွင်းက ဌာနခွဲရုံးသို့သွားရောက်ပြီး၊ "တိုင်းပြည်၏ စက်မှုတိုးတက်ရေး မဟာဗျူဟာနှင့်ကိုက်ညီသော" မြန်မာ နိုင်ငံရှိ စီမံချက်များ အရှိန်မြှင့် တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်စေရေး အတွက် ညွန်ကြားချက်များ ပေးခဲ့ပါသည်။
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံဆည်နှင့် မေခ/ မေလိခဆည်များ
Building 3, No. 28, Financial Street, Xicheng District, Beijing 100032 PRC
+86 10 66216666
+ - တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကွန်ရက် (China Southern Power Grid Co.) (CSG) Click to collapse
တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကွန်ရက် (China Southern Power Grid Co.) (CSG)
တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းလျှပ်စစ်ဓါတ်အားကွန်ရက် (CSG) သည်၊ တရုတ်ပြည်၏ တောင်ပိုင်းပြည်နယ် ၅ ခုမှ ကော်ပိုရေး ရှင်းများကို ပေါင်းစုလျှက် ၂ဝဝ၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် တည်ထောင်ခဲ့သော အစိုးရပိုင်ကုမ္ပဏီတခု ဖြစ်ပါသည်။ (CSG) သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ တောင်ပိုင်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ကွန်ရက်နှင့် ပတ်သက်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ တည်ဆောက်မှုနှင့် စီမံ အုပ်ချုပ်မှုတို့ကိုသာမက လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ပို့လွှတ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်းများကိုပါ တာဝန်ယူရသည်။ လက်ရှိအားဖြင့် ဤကုမ္ပဏီ သည် အစိုးရပိုင်ကုမ္ပဏီ ဖြစ်သော်လည်း ကမ္ဘာအကြီးဆုံးလုပ်ငန်းကြီး (၅ဝဝ) စာရင်း (Fortune 500 Global List) တွင် (၂၆၆) အဆင့် ရှိနေပါသည်။ ၎င်းသည် မဟာမဲခေါင်ဒေသ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ကော်ပိုရေးရှင်းတွင် နိုင်ငံတော်ကောင်စီက ခန့်အပ်တာဝန်ပေးထားသည့် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်လည်း ဖြစ်သည့်အပြင် မဟာမဲခေါင်ဒေသ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး လုပ်ငန်းကို တက်တက်ကြွကြွ တွန်းဆော်ပေးလျှက် ရှိသည်။
ရွှေလီ အမှတ် (၁) ဆည် (CSG ၏ လက်ခွဲကုမ္ပဏီတခုဖြစ်သည့် Yunnan Power Grid Co. မှတဆင့်)
6 Huasui Road, Zhujiang Xincheng, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province 510623 PRC
+86 20 38121080
+ - တရုတ်နိုင်ငံ ကျောက်သုံးလုံးဆည် စီမံချက် ကော်ပိုရေးရှင်း [China Three Georges Project Corporation (CTGPC) Click to collapse
တရုတ်နိုင်ငံ ကျောက်သုံးလုံးဆည် စီမံချက် ကော်ပိုရေးရှင်း [China Three Georges Project Corporation (CTGPC)]
(CTGPC) ကုမ္ပဏီကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် နာမည်ကြီး ကျောက်သုံးလုံးဆည်ကို တည်ဆောက်ရန် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ရန်ဇီးမြစ် (Yangtze River) မှ အရင်းအမြစ်များကို စတင်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်သည့် ကျောက်သုံးလုံးဆည်မှ မဂ္ဂါဝပ်ပေါင်း ၂၁,၀၀၀ ကို ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်ပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးမှုနှင့် လူမှုရေးထိခိုက်နစ်နာမှုများ အကြီး အကျယ် ဖြစ်လာဖွယ်ရှိသောကြောင့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပတွင် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေကြပါသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် (CTGPC) ကုမ္ပဏီက ဆိုက်နိုဟိုက်ဒရို၊ တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကွန်ရက် ကုမ္ပဏီ (China Southern Power Grid Co.) တို့နှင့် သံလွင်မြစ်ဝှမ်းဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်အတွက် သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။ ဤ သဘောတူညီချက် အသေးစိတ်ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း မရှိပါ။
No.1 Jianshe Road, Yichang, Hubei 443002 PRC
+86 717 6276666
+ - တရုတ်နိုင်ငံ ရေအရင်းအမြစ်နှင့် ရေအားလျှပ်စစ် တည်ဆောက်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်း (China Water Resources and Hydropower Construction Corporation) Click to collapse
တရုတ်နိုင်ငံ ရေအရင်းအမြစ်နှင့် ရေအားလျှပ်စစ် တည်ဆောက်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်း (China Water Resources and Hydropower Construction Corporation)
ဆိုင်နိုင်ဟိုက်ဒရို (Sinohydro) ကုမ္ပဏီ၏ လက်ခွဲကုမ္ပဏီတခုဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ ရေအရင်းအမြစ်နှင့် ရေအားလျှပ်စစ် တည်ဆောက်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်းက ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ဒါးပိန်ဆည် (တပိန်ဆည်) တွင် သံထည်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများနှင့် စက်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်း အပါအ၀င် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေပါသည်။
+ - တရုတ်နိုင်ငံ သွင်းကုန်-ထုတ်ကုန်ဘဏ် [Export-Import Bank of China (China Exim Bank) Click to collapse
တရုတ်နိုင်ငံ သွင်းကုန်-ထုတ်ကုန်ဘဏ် [Export-Import Bank of China (China Exim Bank)]
တရုတ်နိုင်ငံ သွင်းကုန်-ထုတ်ကုန်ဘဏ် (China Exim Bank) သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဆည်ကြီးများတည်ဆောက်ရေးအတွက် အဓိက ဘဏ္ဍာငွေထောက်ပံ့သူ ဖြစ်လာနေပါသည်။ ၎င်းက နီပေါနိုင်ငံ၊ ဥဇဘက်ကစ္စတန်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ မလေးရှား၊ ကမ် ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ အယ်လ်ဘေးနီးယား၊ ဂါဘွန်၊ ဂါနာ၊ ဂီနီယာ၊ မိုဇမ်ဘစ်၊ နိုက်ဂျီးရီးယား၊ ကွန်ဂို၊ ဆူဒန်နှင့် တိုဂိုနိုင်ငံ များတွင် ဆည်များ တည်ဆောက်နေပါသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ သွင်းကုန်-ထုတ်ကုန်ဘဏ် (China Exim Bank) က ၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင် ရာ မူဝါဒကို ချမှတ်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် လူအများသို့ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် တရုတ်နိုင်ငံ သွင်းကုန်-ထုတ်ကုန်ဘဏ် (China Exim Bank) က ပို၍ပြည့်စုံသည့် "တရုတ်နိုင်ငံ သွင်းကုန်-ထုတ်ကုန် ဘဏ်မှ ချေးငွေများဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် စီမံချက်များအတွက် သဘာ၀၀န်းကျင်နှင့် လူမှုရေးထိခိုက်မှုများ အကဲဖြတ်ရန် လမ်းညွှန်" ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုမည့်သူများအနေနှင့် ချေးငွေကို အတည်မပြုမီ သဘာ ၀၀န်းကျင်နှင့် လူမှုရေးထိခိုက်နစ်နာမှုများ ရှိ-မရှိကို အကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှု ပြုရမည် ဖြစ်သည်။ (နိုင်ငံတကာ၏မြစ်များ International Rivers မှ The New Great Walls အကြောင်းဖော်ပြချက်မှ)
No.77, Bei He Yan Street, Dongcheng District, Beijing 100090 PRC
+86 10 64090988
+ - ဂိုးလ် ၀ါတာ အရင်းအမြစ် ကုမ္ပဏီ (Gold Water Resources Company) Click to collapse
ဂိုးလ် ၀ါတာ အရင်းအမြစ် ကုမ္ပဏီ (Gold Water Resources Company)
ယခုအချိန်တွင် သတင်းအချက်အလက်များ မရရှိသေးပါ။
+ - ဟင်နာဂျီ ဦးပိုင် ကုမ္ပဏီအုပ်စု (ယခင်က ဖားဆိုက်တက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီအုပ်စု) Hanergy Holding Group Company (formerly Farsighted Investment Group Company) Click to collapse
ဟင်နာဂျီ ဦးပိုင် ကုမ္ပဏီအုပ်စု (ယခင်က ဖားဆိုက်တက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီအုပ်စု) Hanergy Holding Group Company (formerly Farsighted Investment Group Company)
၎င်းအဖွဲ့၏ အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်အရ ဟင်နာဂျီဦးပိုင် ကုမ္ပဏီအုပ်စုသည် (အတိုကောက်အားဖြင့် ဟင်နာဂျီ ဦးပိုင် အုပ်စု Hanergy Holding Group ဟု ခေါ်သည်) ယခင် ဖားဆိုက်တက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီအုပ်စုမှ စတင်လာခြင်း ဖြစ် ပြီး၊ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် အများပိုင်ကုမ္ပဏီအသွင်ပြောင်း ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၎င်းကုမ္ပဏီအုပ်စုသည် "အကြီးဆုံးနှင့် သန့်ရှင်းစွမ်း အင် အသုံးချရေးကိစ္စကို တရုတ်နိုင်ငံတွင် အထူးပြုဆောင်ရွက်နေသည့်ကုမ္ပဏီအုပ်စု" ဟု ဆိုသည်။ ရေအားလျှပ်စစ်၊ လေအားလျှပ်စစ်၊ အဆင့်မြင့်နည်းပညာဖြင့် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စွမ်းအင်ထိရောက်စွာ အသုံးချနိုင်မှု၊ စွန့်ထုတ်ပစ္စည်း လျှော့နည်းစေရေးကိစ္စများကို အဓိကထား၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ် လုပ်ဆောင်နေသည်။ ဤအုပ်စုတွင် ယခုအခါ တဒါဇင်ကျော်သည့် လုံးဝပုဂ္ဂလိကပိုင်နှင့် အစုရှယ်ယာရှင်များပိုင် လက်ခွဲကုမ္ပဏီများ ရှိနေသည်။ ၎င်းကုမ္ပဏီအုပ်စုသည် နယ်သာလန်နိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့တွင် လက်ခွဲကုမ္ပဏီများတည်ထောင်ထားသည်။ အမေရိကန်ပြည် ထောင်စု တက်စ်ဆပ်ပြည်နယ်ရှိ ယူနီပါဝါ ကော်ပိုရေးရှင်း Unipower Inc. သည်လည်း တခုအပါအ၀င် ဖြစ်သည်။
ဟန်နာဂျီ ကုမ္ပဏီသည် ကုလသမဂ္ဂ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ UN Global Compact. စာချုပ်ကို အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ရေး ထိုးထားသည့် ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေး ကော်မီတီသည် "ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုပြုမည့် စီမံကိန်းများကို စစ်ဆေးခြင်း၊ စမ်းသပ်လေ့လာခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီး၊ ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများအပေါ် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် မပျက်စီးစေရေး ထိန်းသိမ်းကာကွယ်သည့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက် သည်ဟု ဆိုပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံက ချမှတ်ထားသည့် နိုင်ငံတော်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးဥပဒေများ နှင့် စည်းမျဉ်းများအတိုင်း ဆောင်ရွက်နေသည်ဟုလည်း ဆိုပါသည်"။
North Floor11, Office Building of Capital Times Square, No. 88, Xichang’an Jie, Xi Cheng District, Beijing 100031 PRC
+ - ဟူနန် ဆာဗိုး ပြည်ပ ရေနှင့် လျှပ်စစ် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီ (Hunan Savoo Overseas Water & Electric Engineering Co.) Click to collapse
ဟူနန် ဆာဗိုး ပြည်ပ ရေနှင့် လျှပ်စစ် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီ (Hunan Savoo Overseas Water & Electric Engineering Co.)
+ - ဂျန်းဇီး အရင်းအမြစ် နေရာချထားရေးနှင့် ဒီဇိုင်း အင်စတီကျု (Jiangxi Water Resources Planning and Design Institute) Click to collapse
ဂျန်းဇီး အရင်းအမြစ် နေရာချထားရေးနှင့် ဒီဇိုင်း အင်စတီကျု (Jiangxi Water Resources Planning and Design Institute)
ဤကုမ္ပဏီ ၂ ခုမှာ တရုတ်နိုင်ငံ ဒါးတန်းအုပ်စု (China Datang Group) တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ဒါးပိန်ရေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းတွင် ပိုင်ရှင်များ ဖြစ်ကြပါသည်။
+ - တောင်ပိုင်း အလယ်ဖက် ဒီဇိုင်းနှင့် သုတေသန အင်စတီကျု [Mid-South Design and Research Institute (CHECC) Click to collapse
တောင်ပိုင်း အလယ်ဖက် ဒီဇိုင်းနှင့် သုတေသန အင်စတီကျု [Mid-South Design and Research Institute (CHECC)]
တောင်ပိုင်း-အလယ်ဖက် ဒီဇိုင်းနှင့် သုတေသနအင်စတီကျု (CHECC) [အတိုကောက်အားဖြင့် MSDI ဟုလည်း ခေါ်သေး သည်] သည် အပြည့်အ၀ ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးထားသည့် တရုတ်နိုင်ငံ ရေအားလျှပ်စစ် အင်ဂျင်နီယာ ကုမ္ပဏီ (China Hydropower Engineering Co.) ၏ ကုမ္ပဏီတခု ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံပိုင် အရင်းအမြစ်များ ကြီးကြပ်ရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲ ရေး ကော်မရှင်၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ရှိနေသည်။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း များအတွက် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုပြုခြင်းနှင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်း၊ အကြံပေးခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့် လေ့လာ အကဲဖြတ်ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်နေသည်။ ထို့အပြင် စီမံကိန်းကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာနိုင်မှု ဆိုးကျိုးများကိုလည်း ဆန်းစစ်လေ့လာပေးသည်။ ၎င်းကုမ္ပဏီက အီရန်၊ လစ်ဗျား၊ လာအို၊ ဗီယက်နမ်၊ ကမ်ဘောဒီးယား၊ အီသီယိုပီးယားနိုင်ငံများ တွင် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။ ၎င်းကုမ္ပဏီ၏ အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်အရ MSDI သည် "အချိန်ပြည့် လူမှု ရေး တာဝန်သိစွာ အပြုသဘောဆောင်သည့် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေသည်" ဟု ဖော်ပြထားသည်။
နိုင်ငံတကာ စီးပွားဆက်သွယ်ဌာန ဖုန်း။ ၀၇၃၁-၅၀၇၃၀၁၉
+ - ရွှေလီမြစ် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း အမှတ် (၁) ကုမ္ပဏီ လီမိတက် [Ruili (Shweli) River I Power Station Co., Ltd.] Click to collapse
ရွှေလီမြစ် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း အမှတ် (၁) ကုမ္ပဏီ လီမိတက် [Ruili (Shweli) River I Power Station Co., Ltd.]
ယူနန်ဖက်စပ် လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ Yunnan Joint Power Development Company (YUPD) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနတို့က ဖက်စပ်၍ တရားဝင် တည်ထောင်ထားသော ကုမ္ပဏီတခု ဖြစ်သည်။ ဤဖက်စပ်ကုမ္ပဏီ သည် ရွှေလီအမှတ် (၁) ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းကို နှစ် ၄ဝ လည်ပတ်ရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ ပြီးနောက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရသို့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးရမည် ဖြစ်သည်။
ရွှေလီ အမှတ် (၁) ဆည်
+ - ဆိုင်နို ဟိုက်ဒရို (Sinohydro) Click to collapse
ဆိုင်နို ဟိုက်ဒရို (Sinohydro)
ဆိုင်နို ဟိုက်ဒရိုသည် တရုတ်နိုင်ငံ အမျိုးသား ရေအရင်းအမြစ်နှင့် ရေအားလျှပ်စစ် အင်ဂျင်နီယာ ကော်ပိုရေးရှင်း (China National Water Resources and Hydropower Engineering Corporation) ဟုလည်း လူသိများကြပြီး၊ တရုတ်နိုင်ငံရှိ အင်အားကြီးမားသော ဟိုက်ဒရောလစ်စက်များနှင့် ရေအားလျှပ်စစ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည့် အကြီးဆုံး ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါသည်။ ဤကုမ္ပဏီက ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင် စီမံကိန်း ၅ဝ ကျော်ကို တာဝန်ခံ လုပ်ဆောင်နေပါ သည်။ ဆိုင်နိုဟိုက်ဒရိုသည် နိုင်ငံရပ်ခြား တိုင်းပြည်များတွင် စီမံကိန်းများ လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ အယ်လ်ဘေးနီးယား၊ ကွန်ဂို၊ ဘီလိုက်ဇ်၊ မလေးရှားနိုင်ငံများတွင် လုပ်ငန်းများ ရှိပါသည်။ ဆိုက်နိုဟိုက်ဒရိုသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေအား လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့ (IHA) ၏ အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့တခု ဖြစ်ပါသည်။
ဧရာဝတီ/ အင်မိုင်ခ/ မလိခဆည်များ
No 22. Che Gongzhuang West Road, Haidian District, Beijing 10044 PRC
+ - ယူနန်ဖက်စပ် လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ [Yunnan Joint Power Development Company (YUPD) Click to collapse
ယူနန်ဖက်စပ် လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ [Yunnan Joint Power Development Company (YUPD)]
၂၀၀၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ယူနန်ဖက်စပ် လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ (YUPD) က မြန်မာနိုင်ငံ၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာန အမှတ် (၁) တို့က တည်ဆောက်-အသုံးချ-လွှဲပြောင်းစနစ် (BOT) ဖြင့် ဖက်စပ်၍ ရွှေလီ အမှတ် (၁) ရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်း ကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ (အထက်သို့ ကြည့်ပါ။) (YUPD) ကုမ္ပဏီက ဖက်စပ်အစုရှယ်ယာ၏ ၈၀% ကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး စီမံကိန်းတည်ဆောက်ရေး၊ လည်ပတ်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကိစ္စများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါ သည်။ ဤစီမံချက်သည် ဤကုမ္ပဏီ၏ တရုပ်ပြည်မပြင်ပတွင် ပထမဦးဆုံး ရေအားလျှပ်စစ် စီမံချက် ဖြစ်ပါသည်။ (YUPD) ကို ကုမ္ပဏီ ၃ ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ- ယူနန် ဟွာနင်း လန်ကန်းမြစ် ရေအားလျှပ်စစ် ကုမ္ပဏီ (Yunnan Huaneng Lancang River Hydropower Co.,) ၊ ယူနန် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကွန်ရက် ကုမ္ပဏီ (Yunnan Power Grid Co.,) နှင့် (YMEC) တို့ ဖြစ်ပါသည်။
+ - ယူနန် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကွန်ရက် ကုမ္ပဏီ (Yunnan Power Grid Co.) Click to collapse
ယူနန် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကွန်ရက် ကုမ္ပဏီ (Yunnan Power Grid Co.)
ယူနန်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကွန်ရက် ကုမ္ပဏီသည် (YUPD) ၏ ဖက်စပ်အဖွဲ့ဝင် ကုမ္ပဏီတခု ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် တရုတ် နိုင်ငံ၏ တောင်ပိုင်းပြည်နယ် ၅ ခုမှ ကော်ပိုရေးရှင်းများကို ပေါင်းစုလျှက် တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ကွန်ရက် ကုမ္ပဏီ [China Southern Power Grid Company (CSG)] အဖြစ် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
49 Toudonglu, Kunming, Yunnan 650011 PRC
+ 86 871 3012222
+ - ဇီဂျီယန်း ဖူချွန်ဂျီယန်း ရေအားလျှပ်စစ် စက်ယန္တယား ကုမ္ပဏီ လီမိတက် [Zhejiang Fuchunjiang Hydropower Equipment Co. Ltd. Click to collapse
ဇီဂျီယန်း ဖူချွန်ဂျီယန်း ရေအားလျှပ်စစ် စက်ယန္တယား ကုမ္ပဏီ လီမိတက် [Zhejiang Fuchunjiang Hydropower Equipment Co. Ltd.]
တရုတ်ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်သည့် ဇီဂျီယန်း ဖူချွန်ဂျီယန်း ရေအားလျှပ်စစ် စက်ယန္တယား ကုမ္ပဏီ လီမိတက် (Zhejiang Fuchunjiang Hydropower Equipment) သည် ရုရှားနိုင်ငံမှ ပစ္စည်းထုတ်လုပ် သူ ကုမ္ပဏီ ပါဝါမရှင်း (Power Machines) နှင့် မဟာဗျူဟာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး စာချုပ်တရပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့က ဟတ်ကြီးရေအား လျှပ်စစ် စက်ရုံအတွက် စက်အစိတ်အပိုင်း ၈ ခုကို ထောက်ပံ့ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
+ - ဇီဂျီယန်း ဦးပိုင်အုပ်စု ကုမ္ပဏီ လီမိတက် [Zhejiang Orient Holdings Group Ltd (ZOHG) Click to collapse
ဇီဂျီယန်း ဦးပိုင်အုပ်စု ကုမ္ပဏီ လီမိတက် [Zhejiang Orient Holdings Group Ltd (ZOHG)]
ကုမ္ပဏီ ၁၆ ခုပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြည်ပပို့ကုန်တင်ပို့ရေးကဏ္ဍတွင် ဦးဆောင်နေသည့် ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်ပါ သည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် အများပိုင်ရှယ်ယာကုမ္ပဏီတခုအဖြစ် စာရင်းတင်သွင်းခဲ့ပါသည်။
Zhefu Factory, Hongqifan Industrial Zone, Fuchunjiang Town, Tonglu County, Zhejiang Province 311504 PRC
+86 571 69969388